माङसेबुङ गाउँपालिकाको नवौं साधारणसभाबाट बजेट सार्वजनिक, कुन क्षेत्रमा कति ? - Limbuwan khabar
माङसेबुङ गाउँपालिकाको नवौं साधारणसभाबाट बजेट सार्वजनिक, कुन क्षेत्रमा कति ?
शुक्रबार, ११ असार, २०७८ बिहानको ०८:४६ बजे, लिम्बुवान न्युज
माङसेबुङ। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अनुमानित आय व्ययसहितको कुल ४० करोड ५१ लाख ७७ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार नवौँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष सुनिता सुब्बाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकि थिइन् । उक्त बजेट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिङ्गोले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ६ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
समपूरक कोषमा २ करोड रुपैयाँ र मर्मत सम्भार कोषमा ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तोकिएको कार्यक्रम संचालन गर्न सशर्त अनुदान शीर्षकमानेपाल सरकारबाट १९ करोड र प्रदेश सरकारबाट ५८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।